SHIRKA SOOMAALIDA KENYA MA DHABAA MISE WAA DHALANTEED. pilot
SHacbiga soomaaliyeed waa kuwa jacel guusha aadna uu neceb guuldaradda. Hadaba dalkeenu wuxuu maanta ku sugan yahay xaalad murago leh,Waxuuna halaq mareen uu noqday cid kastaa oo horey ugu hanqal - taageysay hanashadiisa, Iyadoo cabsi weyn laga qabo inuu cadow gacanta uu galo dibna looga noqdo Waxii uu shacbigu ka dhiidhiyey qarni ku dhawaad ka hor.
Waxaa soo if baxay astaamo aan soomaalida intooda badan horay loogu aqoon ee ah shisheeye-kalkaalnimada iyo gumeysi-doonka, DHuuni raacnimo iyo calool-uu-shaqeystanimo, hayeeshaalenimo iyo habar wacasho shisheeye Waxaa muuqata in hogaamiyeyaasha kooxuhu aysan wax dan ah ka lahayn in ay dib uu soo laabato Qaranimo soomaliyeed, Iyadoo xaaladaha haatan jira ay muujiyeen in hogaamiyeyaasha qaarkood oo Hammigoodii ahaa in soomalia Madax uu noqdaan ay hoos uga soo dhaceen, Mid walibana uu dan mooday inuu dul yururo Qayb uu u arkay inuu danahiisa ku oofsan karo ha ahaato mid uu jeedo ama ha ahaato mid uu xoog ku haysto.
Waxaa hoos uu dhacdey rajadii uu shacbiga ka lahaa dib uu heshiinsiinta iyo ebyid nidaam dowladeed iyadoo shirarkii ugu danbeeyayna noqdeen kuwa lugu fashilmay, Hadalladii ugu danbeeyey ee hogaamiyeyaasha kooxaha ka soo yeeray cadeeyeen inaan haatan iyo waqti uu dhaw heshiis imaan karin. Hadaba la yaab ma leh in wargeysyadda dalka ka soo baxa qaarkood markii ay miisaan saareen dhibaatadda maanta dalka ka jirta ee ugu yaraan ay hal milyan dagaaladda sokeeyey ku geeriyoodeen, milyanne baro baxay(Qaxooti noqdey), Malaayiin diihaal gaajo ku sugan tahay la door bidi lahaa inaan jabbhadu dagaal ku qaadeen xukuumaddii hore.
Waxaa laga yaabaa inay jabbhadii dagaalka qaaday ay taasi ka careysiiso, Balse kuwii bilaabay lugu tilmaami karo aabihii dagallada sokeeye ee dalka waxaan weydiin lahayn haddii ay ogaan lahayeen xaalladan ma door bidi lahaayeen iney dalka dagaal sokeeye ka bilaabaan shisheeyane ku soo hogaamiyaan. Haddii jawaabtoodu noqota mid waaqaca ku saleysan waxaay ahaan lahayd maya oo dhibkii jirey baan uu adkeysan lahayn,Hadise ay noqota mid xaqiiqadda ka fog wey is giijin lahayeen,Taasina waxaay inoo muujin lahayd ineysan dan ka lahayn nolasha iyo geerida dadkooda.
Aqristoow madaama aan marayno xaalad aad uu adag oo runtii wax lugu tilmaami karo aysan jirin,Umadii soomaliyeedna haysato ayaan darro oo ay daadsan yahiin dacaladda dunidda, Ma kula tahay inaan ku dadaalno uu towbad keenida alle, Innagoo waydiisanayna dambi dhaaf,Kana baryayna inuu nagga qaado collaadaan aan dhamaadka lahayn. Aqristoow bal ka waran hadii uu dalkeenii uu halis uu yahay inuu cadow gaalo ah gacanta uu galo inagiina aan ka dhamaan la,nahay qolo hebel baa la jebiyay ama laga qabsadey meel hebel iyo waxii la mid ahba inagoo ku duuleyno cadifadda qabiilka uu ina barey anoo og halka uu maanta qabiilka ina dhigay. ugu danbeyntii haatan iyo dan laba arimoodbaa inale gudboon oo ah inaan kale doorano gobanimo oo aan ula jeedno inaan noqonno wadan xor ah oo ka taliya taqriirul-masiirkiisa iyo gunnimo oo ah inaan ku noqonno gumeysiga oo ay noo taliyaan gumeysi madoow iyo mid cadba, Waana arrin uu taalo guud ahaanba shacbiga soomaliyeed gudaha iyo dibaddaba, Wadadda lugu gaari karano waa in marka hore leyska qabto kuwa gumeysiga nagu soo hogqaaminaya.
Aqristow haatan is diyaarin ayaa jirta taasi oo loo diyaar garobaya sidii shirka keenya looga dhalali lahaa ka qeyb galkiisa.Waxaay su,aasha tahay ma guuleysan doonaa shirkaas mise loo qaadan karaa mid dhalanteed ah. Durbaba waxaa soo if baxay calacal ka soo yeeraya hogaamiyayaasha qaarkood oo leh shirkaasi ma ogolin taasi oo niyad jab ku abuuri doonta shacbiga somaliyeed dhamaantood oo maanta uu heelan iney helaan dowalad loo wada dhan yahay. balse arinta yeeyna noqonin sidii erayadda ah. Dooradda kun jeer iyo kow kurug-kurug ma deeyso taasi oo aan ugu dan leeyahay hogaamiyayaasha oo idil oo nin walbaa uu arimaha somaliya ku xeray in isaga uu madaxweyne noqda. Waaba yaabee soomaliya imissa madaxweyne ayay qaabili kartaa? Dhaamaad.